IGQEMEKE ENGEQIWA NTWALA UKHONGOLOSE NGOMTHEMBU – Sivubela intuthuko Newspaper
IGQEMEKE engeqiwa ntwala i-African National Congress (ANC) ngokudlula emhlabeni isigubhukane komunye wamalunga ayo, uMnu Ricardo Mthembu (50). UMthembu udlula emhlabeni nje ubesaqhoqhobele isikhundla sokukhulumela i-ANC KwaZulu Natal.
Ngaphambilini uMthembu uke waba yiMeya yaKwaDukuza, enyakatho yeKwaZulu Natal, waphinda wamela i-ANC esiShayamthetho saKwaZulu Natal. Kuthiwa udlule emhlabeni ngemuva kokuba enqotshwe wubhubhane iCorona oseludlule nezigidi zemiphefumlo emhlabeni jikelele.
Izindaba zokudlula kwakhe emhlabeni zishaqise abantu abaningi. UNdunankulu wesiFundazwe, iKwaZulu Natal, uMnu Sihle Zikalala lezi zindaba uzichaze njengezibehle ngaphezulu. “Ukudlula emhlabeni kukaMthembu kusiphuce iqabane, ubhuti, futhi umuntu obenomuqondo obukhali futhi enobuntu. Enjalo nje enobuholi obungajwayelekile,” usho kanje.
Eqhuba uZikalala uphinde wancoma kakhulu uMthembu ethi nguyena kanye owaletha uzinzo embonini yamatekisi KwaDukuza njengoba kwakunguye owayesekhaleni ekutheni kube khona ukubuyisana kanye noxolo kule mboni. NoNgqongqoshe wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdaba KwaZulu Natal, uMnu Sipho Hlomuka naye ubhonge emsweneni ngalezi zindaba zokudlula emhlabeni kukaMthembu.
“Ngalesi sikhathi esinzima lapho izwe lonkana kanye nesiFundazwe sethu sisempini yokulwa neCovid 19 kusethusile ukudlula komunye wabebephambili ekulweni nalolu bhubhane,” usho kanje. UMthembu abanye bamchaze njengomuntu obekubeka eqhulwini ngaso sonke isikhathi ukulekelelwa kwabanye abantu, lokho ubekwenza esebenzisa iNjabulo Ricardo Charity Foundation.
Kusenjalo kuphinde kwafana nokufakwa kukasawoti esilondeni esibhibhayo ukuzwakala kwezindaba zokudlula emhlabeni kweKhansela laseMlaza, uNkk Nomusa Mthembu (71).